Hair Dryer ဆိုတာ ဒီနေရာတွေမှာလည်း အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးကြပြီလား? – Trend.com.mm
Hair Dryer ဆိုတာ ဒီနေရာတွေမှာလည်း အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးကြပြီလား?
Posted on June 8, 2018 by Noel
Hair Dryer ကသင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀အခက်အခဲတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဆံပင်ခြောက်အောင်တစ်ခုတည်းတင်မကပဲကျန်တဲ့မွစိမွစိအခက်အခဲလေးတွေဖြေရှင်းလို့ရမှာဖြစ်လို့ Dryer တစ်ခုရှိရုံနဲ့တင် အိုကေပြီပေါ့။ဒါဖြင့် Dryer တွေက ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ
ပရိဘောဂတွေ၊ပြတင်းပေါက်တွေ၊ကားဘန်ပါတွေမှာ Sticker တွေကပ်ထားမိမယ်။ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြီးခွာချင်တဲ့အခါကျတော့ လွယ်လွယ်ကူကူပြန်ခွာလို့မရတာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ Dryer လေးနဲ့ အပူပေးမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတဲ့။ဒါဆိုရင်တော့အလွယ်တကူခွာလို့ရပါလိမ့်မယ်။
မီးဖိုချောင်မှာရှိတဲ့ဆားဘူးတို့၊ငရုတ်ကောင်းဘူးတို့ ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး အခြောက်ခံထားဖို့ အချိန်မရှိဘူး၊ပြန်ဖြည့်ရတော့မယ်ဆိုရင် Dryer ကိုသုံးပြီး ဘူးကိုအခြောက်ခံလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာ၊အလုပ်ရှုပ်လည်းသက်သာပေါ့။
ပရိဘောဂတွေမှာဖယောင်းတိုင်ထွန်းမိပြီးဖယောင်းစက်တွေကျမယ်။သိတဲ့အတိုင်းဖယောင်းဆိုတာကလည်း ဓားနဲ့ခွာချ၊ခြစ်ချမှကွာတာပါ။အဲ့ဒီအခါDryer လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်ရေစိုနေတဲ့ အ၀တ်စနဲ့သုတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။နံရံပေါ်မှာ ကလေးငယ်တွေဆော့ထားလို့ ရောင်စုံဖယောင်းခဲတံ
ရှူးဖိနပ်ဝယ်ထားပြီး ကျပ်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါသလား။ဒါဆိုရင် ခြေအိတ်စွပ်ပြီးရှူးဖိနပ် ကိုအရင်စီးလိုက်ပါ။ပြီးရင် Dryer နဲ့ ကျပ်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့နေရာကို မှုတ်လိုက်ပါ။ လေနဲ့မှုတ်ထုတ်နေတုန်းသင့်ရဲ့ခြေချောင်းတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားပေးပါ။အပူမှုတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ရှူးဖိနပ်ကိုပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ညမအိပ်ခင်အပူနဲ့မှုတ်ထုတ်ပြီးမနက်ကျစီးတဲ့အခါ အရင်ကလောက် တင်းကျပ်မနေတော့တာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
မီးပူမတိုက်ရသေးလို့အ၀တ်အစားတွေတွန့်ကြေနေမယ်၊စားပွဲခင်းတွေတွန့်နေမယ်၊လိုက်ကာတွေတွန့်ကြေနေမယ်။မီးပူကလည်းအလွယ်တကူမရှိဘူး။Dryer ပဲရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီတွန့်ကြေနေတဲ့အ၀တ်အစားတွေ၊စားပွဲခင်းတွေကို ရေလေးအနည်းငယ်တောက်ပြီး Dryer အပူနဲ့မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။အတွန့်အခေါက်တွေပြေသွားတဲ့အထိ မှုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုဘယ်သူမှထင်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။လေထိုးမွေ့ယာမှာ လေတွေလျော့သွားလို့လေထိုးတံ မရှိသေးရင် Dryer နဲ့လေမှုတ်သွင်းလို့ရပါတယ်တဲ့။
Hair Dryer ကသငျ့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝအခကျအခဲတျောတျောမြားမြားကိုဖွရှေငျးပေးနိုငျပါတယျတဲ့။ ဆံပငျခွောကျအောငျတဈခုတညျးတငျမကပဲကနျြတဲ့မှစိမှစိအခကျအခဲလေးတှဖွေရှေငျးလို့ရမှာဖွဈလို့ Dryer တဈခုရှိရုံနဲ့တငျ အိုကပွေီပေါ့။ဒါဖွငျ့ Dryer တှကေ ဘယျလိုနရောတှမှော
ပရိဘောဂတှေ၊ပွတငျးပေါကျတှေ၊ကားဘနျပါတှမှော Sticker တှကေပျထားမိမယျ။ဒါပမေဲ့ ပွနျပွီးခှာခငျြတဲ့အခါကတြော့ လှယျလှယျကူကူပွနျခှာလို့မရတာတှရှေိပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ Dryer လေးနဲ့ အပူပေးမှုတျထုတျလိုကျပါတဲ့။ဒါဆိုရငျတော့အလှယျတကူခှာလို့ရပါလိမျ့မယျ။
မီးဖိုခြောငျမှာရှိတဲ့ဆားဘူးတို့၊ငရုတျကောငျးဘူးတို့ ဆေးကွောသနျ့စငျပွီး အခွောကျခံထားဖို့ အခြိနျမရှိဘူး၊ပွနျဖွညျ့ရတော့မယျဆိုရငျ Dryer ကိုသုံးပွီး ဘူးကိုအခွောကျခံလို့ရပါတယျ။ဒါဆိုရငျ အခြိနျကုနျလညျးသကျသာ၊အလုပျရှုပျလညျးသကျသာပေါ့။
ပရိဘောဂတှမှောဖယောငျးတိုငျထှနျးမိပွီးဖယောငျးစကျတှကေမြယျ။သိတဲ့အတိုငျးဖယောငျးဆိုတာကလညျး ဓားနဲ့ခှာခြ၊ခွဈခမြှကှာတာပါ။အဲ့ဒီအခါDryer လေးနဲ့မှုတျပေးလိုကျပါ။ပွီးရငျရစေိုနတေဲ့ အဝတျစနဲ့သုတျပေးလိုကျရုံပါပဲ။နံရံပျေါမှာ ကလေးငယျတှဆေော့ထားလို့ ရောငျစုံဖယောငျးခဲတံ
ရှူးဖိနပျဝယျထားပွီး ကပျြနတေယျလို့ခံစားနရေပါသလား။ဒါဆိုရငျ ခွအေိတျစှပျပွီးရှူးဖိနပျ ကိုအရငျစီးလိုကျပါ။ပွီးရငျ Dryer နဲ့ ကပျြနတေယျလို့ခံစားရတဲ့နရောကို မှုတျလိုကျပါ။ လနေဲ့မှုတျထုတျနတေုနျးသငျ့ရဲ့ခွခြေောငျးတှကေိုလညျးလှုပျရှားပေးပါ။အပူမှုတျထုတျပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ ရှူးဖိနပျကိုပွနျသိမျးထားလိုကျပါ။ညမအိပျခငျအပူနဲ့မှုတျထုတျပွီးမနကျကစြီးတဲ့အခါ အရငျကလောကျ တငျးကပျြမနတေော့တာမွငျတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
မီးပူမတိုကျရသေးလို့အဝတျအစားတှတှေနျ့ကွနေမေယျ၊စားပှဲခငျးတှတှေနျ့နမေယျ၊လိုကျကာတှတှေနျ့ကွနေမေယျ။မီးပူကလညျးအလှယျတကူမရှိဘူး။Dryer ပဲရှိတယျဆိုရငျ အဲ့ဒီတှနျ့ကွနေတေဲ့အဝတျအစားတှေ၊စားပှဲခငျးတှကေို ရလေေးအနညျးငယျတောကျပွီး Dryer အပူနဲ့မှုတျထုတျပဈလိုကျပါ။အတှနျ့အခေါကျတှပွေသှေားတဲ့အထိ မှုတျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကိုဘယျသူမှထငျထားမှာမဟုတျပါဘူး။လထေိုးမှယေ့ာမှာ လတှေလြေော့သှားလို့လထေိုးတံ မရှိသေးရငျ Dryer နဲ့လမှေုတျသှငျးလို့ရပါတယျတဲ့။
F4 ပရိသတ်တွေအတွက် ရှော့ခ်ရလောက်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ပြောပြခဲ့တဲ့ Kim Joon